Icebo - Imagazini yoyilo
Fumanisa uyilo oluhle kubaqulunqi kwihlabathi liphela.
Jonga uyilo oluhle
Fumanisa iimveliso zokuyila kwimveliso yehlabathi.
Phonononga iimveliso zokuyila
Fumanisa iiprojekthi ezinkulu zoyilo kubakhi behlabathi.
Jonga uyilo olukhulu
Fumanisa uyilo lwefashoni yoyilo kubaqulunqi befashoni bamanye amazwe.
Jonga uyilo lwefashoni yoyilo
Fumanisa uyilo olugqibeleleyo kubaqulunqi bemizobo yehlabathi.
Phonononga uyilo olukhulu lomzobo
Fumanisa uyilo olucokisekileyo kwiiarhente zoyilo zehlabathi.
Vavanya ezona zicwangciso zobuchule
Iindwendwe I-Serenity Suites ilele eNikiti, eSithonia yokuhlala eChalkidiki, eGrisi. Ubunzima buqukethe iiyunithi ezintathu ezinama-suites angamashumi amabini kunye nedama lokuqubha. Iiyunithi zokwakha ziphawula ubume obunzulu bendawo ethe tyaba ngelixa libonelela ngeyona ndlela yokujonga elwandle. Idama lokuqubha sisiseko esiphakathi kwendawo yokuhlala kunye nezinto eziluncedo zoluntu. Indawo yokubuka iindwendwe yindawo ephawuleka kakhulu kule ndawo, njengeqokobhe le-extrovert elinempawu zangaphakathi.
Uv Sterilizer I-SunWaves sisichumisi esikwaziyo ukuphelisa iintsholongwane, ukungunda, ibhaktheriya kunye neentsholongwane kwimizuzwana nje esi-8. Yenzelwe ukwaphula umthwalo webhaktiriya okhoyo kwimigangatho efana nekomityi yekofu okanye iisosi. I-SunWaves yayilwa ngengxaki yonyaka we-COVID-19, ukukunceda ukuba wonwabele intshukumo efana nokusela iti kwi-cafe ngokukhuselekileyo. Ingasetyenziswa kokubini kubume bobuchwephesha kunye nekhaya kuba ngesenzo esilula sibulala inzala ngexesha elifutshane kakhulu ngesibane se-UV-C esinobomi obude kunye nokugcinwa okuncinci, kukwanceda ekunciphiseni izinto ezilahlwayo.
Inkqubo Yemisitho Yoyilo
Inkqubo Yemisitho Yoyilo imiboniso, ukhuphiswano loyilo, oomasifundisane, ukucebisa uyilo lwezemfundo kunye nokupapasha iiprojekthi ezijolise ekukhuthazeni abaqulunqi baseRussia kunye nemveliso kumazwe aphesheya. Imisebenzi yethu ivuselela abaqulunqi baseRussia ukuba bagqibelele ulwazi kunye nezakhono zabo ngeeprojekthi zamanye amazwe kwaye babancede baqonde indima yabo kuyilo loluntu, indlela yokuphakamisa nokwenza iimveliso zabo ukuba zikhuphisane, kwaye benze nezinto eziyinyani.
Isixhobo Semfundo Noqeqesho
Isixhobo Semfundo Noqeqesho I-Corporate mandala sisixhobo esitsha semfundo noqeqesho. Kukudityaniswa kwezinto ezintsha kunye nokungaqhelekanga komgaqo-siseko wam mandala kunye nesazisi esiliqokelelo esenzelwe ukonyusa intsebenziswano kunye nokusebenza kweshishini liphela. Ngapha koko, yinto entsha yesazisi senkampani. I-Corporate mandala ngumsebenzi weqela kwiqela okanye imisebenzi eyenziwa ngumphathi. Yenzelwe ngokukodwa inkampani ethile kwaye ifakwa umbala liqela okanye ngumntu ngamnye ngokukhululekileyo nangokufanelekileyo apho wonke umntu unokukhetha nawuphi na umbala okanye ibala.
Isicoci Sefandesi Esibonakalayo Se-Ultrasonic
Isicoci Sefandesi Esibonakalayo Se-Ultrasonic I-Prisma yenzelwe uvavanyo lwezinto ezingavumi ukuhlasela kwezona ndawo zixineneyo. Luyeyona nto iphambili kumcuphi ukufaka umlinganiso wexesha lokwenyani kunye nokuskena kwe-3D, okwenza ukutolikwa kwesiphoso kube lula kakhulu, ukunciphisa ixesha lobuchwephesha kwindawo. Ngendawo ebanzi engenakufunyanwa kwaye neendlela ezahlukeneyo zokuhlola, I-Prisma inokugubungela zonke izicelo zokuvavanya, ukusuka kwimibhobho yeoyile ukuya kwizinto ze-aerospace. Sisicatshulwa sokuqala esineenkcukacha ezirekhodiweyo zokudibanisa idatha, kunye nokuzenzekelayo kwengxelo yePD. Unxibelelwano olungenantambo kunye ne-Ethernet luvumela iyunithi ukuba iphuculwe ngokulula okanye ifunyanwe.
Inkqubo Yokucocwa Kwamanzi Elabhoratri
Inkqubo Yokucocwa Kwamanzi Elabhoratri I-Purelab Chorus yenkqubo yokuqala yokucoca amanzi eyilelwe ukulingana neemfuno zelebhu kunye nendawo. Inikezela onke amabakala amanzi acociweyo, inika isisombululo esisoyikekayo, esiguquguqukayo, esisisombululo. Izinto ezikwimodyuli zinokusasazwa kwilabhoratri okanye ziqhagamshelwe ngapha nangapha kwifomathi engafaniyo yendlela, ukunciphisa indlela yonyawo. Ulawulo lwe-Haptic lubonelela ngamaxabiso okuhamba okungqengqeleka kokuhamba, ngelixa ilitha lokukhanya libonisa inqanaba leChorus. Itekhnoloji entsha yenza ukuba iChorus iyeyona nkqubo iphucukileyo, inciphise ifuthe lendalo kunye neendleko zokuqhuba.
Siyayithanda uyilo lokuqala kunye nobuchule bokuyila, ubugcisa bokuyila, ifashoni, uyilo lwemizobo, ubuchule bokuyila kunye nobuchule bokuyila. Yonke imihla, sikhetha kwaye sipapashe uyilo olufanelekileyo ngabaqulunqi abanetalente, amagcisa anobuchule bokuyila, abakhi bezinto ezintsha kunye neempawu ezinkulu. Injongo yethu kukwenza umbulelo kwilizwe lonke kunye nokwazisa ngoyilo olufanelekileyo.
Uyilo loyilo (419)
The Cutting Edge Ukuhambisa Ikhemesti Tuesday 5 July
Cloud of Luster I-Chapel Yomtshato Monday 4 July
Sberbank Headquarters Atrium Sunday 3 July
Yila udliwanondlebe losuku Tuesday 5 July
Yila intsomi yosuku Monday 4 July
Uyilo losuku Sunday 3 July
Umyili wosuku Saturday 2 July
Iqela loyilo losuku Friday 1 July
Iindwendwe Uv Sterilizer Inkqubo Yemisitho Yoyilo Isixhobo Semfundo Noqeqesho Isicoci Sefandesi Esibonakalayo Se-Ultrasonic Inkqubo Yokucocwa Kwamanzi Elabhoratri
2022 Imagazini yoyilo.